Global Voices teny Malagasy » Syria: Fitiavana ao Stuttgart · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Aogositra 2017 8:20 GMT 1	 · Mpanoratra Yazan Badran Nandika (fr) i PREPA ECT2, Liva Andriamanantena
Sokajy: Alemaina, Syria, Haisoratra, Hevitra, Mediam-bahoaka, Mozika, Tantara
Milalao ny fon'ny mpamaky ny lahatsorany i Mariyah , bilaogera Syriana iray ao Damaskosy amin'ny andian-dahatsoratra izay marefo indrindra momba ny tantaran'i Ghassan sy Alexandra.
Nanomboka nandritra ny takariva mahafinaritry ny ririnina tamin'ny taona 1955  izany tany Stuttgart, any Alemaina:
Tsy hazavaina amintsika mihitsy kanefa mahatsapa isika fa ray aman-drenin'i Mariyah i Ghassan sy i Alexandra, ka izay no vao maika mahatonga izany tantara izany ho mahavalalanina .
Nanapa-kevitra mihitsy aza izy ny hamerina indray  ny fahafinaretana niaraka tamin'ny mozika tamin'ny andro ririnina mahafinaritr'i Ghassan sy Alexandra tany amin'ny taona 1955 .
Azonao jerena ny fizaran-tantara izay navoaka ato . Efa eto amin'ny fizarana fahadimy isika ankehitriny, ary miandry amim-paharetana ny fizarana fahenina!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/14/105447/
 takariva mahafinaritry ny ririnina tamin'ny taona 1955: http://mariyahsblog.blogspot.com/2008/10/story-of-ghassan-and-alexandra.html
 hamerina indray: http://mariyahsblog.blogspot.com/2008/11/musical-interlude.html